Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị gbasara Urdolls
Ajụjụ ndị a na-ajụkarị na ndị ahịa na ụlọ ahịa Urdolls
Q: Kedu ihe dị iche n'etiti TPE na silicone?
Uru nke ụmụ bebi TPE:
1. Ọnụahịa dị ọnụ ala (site na $ 700 ruo $ 2000)
2, ịdị nro dị elu, nke kachasị nso na mmetụta nke ezigbo akpụkpọ anụ mmadụ, juputara na mgbanwe.
3. Mfe fechaa ma dịkwa mfe ịkwaga.
4, nchekwa ma dị mma na gburugburu ebe obibi, enweghị mmerụ ahụ mmadụ.
Ọ ọghọm: nrụrụ na nnukwu okpomọkụ, enweghị ike ịnagide okpomọkụ karịrị 104 degrees Fahrenheit (40 Celsius C)
Uru nke bebi silicone:
1, Ọ dịghị isi ma ọlị, ọ dị mma maka ahụ mmadụ, mee ka gị na ya nwee mmekọrịta chiri anya, zuru ike nwee ịhụnanya
2. Akụrụngwa nwere nnukwu njupụta, ọ naghị adị mfe nrụrụ ma mebie, ọ na-adịgide adịgide.
3, Stable ihe onwunwe, ọ dịghị mfe oxidize na afọ.
4. A na-ahụpụta ọdịdị nke akpụkpọ aka na ụkwụ na ikwesị ntụkwasị obi dị elu.
Ọghọm: elu na-eri, ubé oké ọnụ (na-emekarị n'elu $ 2,000)
Q: Gịnị bụ mmetụta nke aka nke gị nwa bebi mmekọahụ?
A: Akpụkpọ anụ nke ụmụ bebi mmekọahụ anyị dị na nke anụ ahụ mmadụ. E nwere ugbu a ụmụ bebi mmekọahụ abụọ nke TPE (Thermoplastic elastomers) na silicone. Ha dị nnọọ nro ma na-agbanwe.
Q: Kedu ihe dị iche n'etiti ikpu arụ n'ime na Fanye ikpu?
A: Otutu onu (wuru na ikpu) pụtara na ikpu na-agbakwunye na ahụ. "Ntinye ikpu" pụtara na a na-etinye ikpu n'ime ahụ n'ụdị tubular.
Njirimara nke ikpu ot (nke etinyere n'ime ya): A naghị ewepu ikpu ahụ. Ọ nọ ndị mmadụ nso. Mmekọahụ banyere mmekọahụ dị ezigbo adị.
Njirimara nke ikpu etinyere: A na-ewepu ikpu. Ọ dị mfe ihicha ma debe.